Okusheshayo: 12 / 14 / 20
⁃ I-Min OS ingu-10.8 noma kamuva… kufaka phakathi iBig Sur 11.0
Ways Izindlela ezingeziwe zokwengeza isithombe kumhleli we-watermark wesithombe.
--- Hudula iconsi lesithombe noma ilogo emthonjeni
--- Noma sebenzisa inkinobho ethi 'khetha' ukukhetha isithombe njengakuqala.
--- Noma sebenzisa cmd-G ukukhetha ifayela lesithombe
Locations Izindawo zesiNgisi ezibuyekeziwe
Crash Ukuphahlazeka okulungisiwe ku-Big Sur 11.0
⁃ Susa ikhabethe - imenyu ye-iCloud
Ifayela elihleliwe-> okusha - isithonjana somugqa we-X.
Crash Ukuphahlazeka okulungisiwe kumbala othile we-watermark ongekho.
Isheke elingeziwe lokulahleka kwelabhulali ye-Vector graphic ~ / izithombe / iWatermark Vectors Clipart. Izophinda izalwe uma ingekho kufolda yesithombe.
⁃ Kulungiswe ukuphahlazeka lapho uhlela noma usebenzisa i-Text Graphics ngokuchaza ngokushintsha umbala.
⁃ Uhlanze umtapo wezincwadi ukulungiselela ukusekelwa kwe-Apple Silcon
Ifomethi ye-WebP ayisekelwa
Isihlungi sokuhlunga nokufaka akubiki ifayili lesithombe elingafundeki (.WebP njll) ku-log akufundeki.
- kuvuselelwe ukusekela emuva ku-mac os 10.9
- Amathiphu wengeze amathuluzi wokuhlela izithonjana (isithonjana ngezansi kwesokudla) esithombeni esilandelayo bese ushintsha umbala wangemuva
- umbhalo wesimo ongaguquguquki awufundeki ku-darkmode
- inkinga elungisiwe enedatha ye-IPTC engalondolozwanga imethadatha yokufaka ibingakopishwa (kubikwe ngumsebenzisi uWalter Frieser).
- inkinga elungisiwe enesithombe sokuqala esingasebenzisi izilungiselelo ze-offset.
- ilungisa ukukhishwa kwe-offset
- ukuvuselelwa kwamakhodi amancane kwasendaweni
- Ukulungiswa kwezixwayiso ezintsha zokuhlanganisa ku-xcode entsha
- I-Apple Notarized
- Kulungiswe inkinga eminingana yeModi Emnyama nge-UI.
- Kususwe iW * Cloud ukwesekwa.
- imingcele ehleliwe nemidwebo ye-vector ekhombisa .DS_Store ewindini le-clipart
- I-bug ehleliwe ku-UI lapho umbhalo wawunqunywa khona
- Ukufundwa kweStegomark okungaguquki kuphukile ku-v2.5.0 kuye ku-2.5.2. Noma iyiphi i-stegomark eyenziwe ngaleyo nguqulo ngeke ifundwe ngamanye ama-OS noma ezinye izinhlobo.
- ukuhlanza ukuthuthukela kufayela elisha lelayisense yesayithi.
- I-bug elungisiwe ngokuphahlazeka lapho kungekho watermark ezenzakalelayo ekhethiwe ngemuva kokusetha kabusha.
- kwasendaweni yaseJapan
- Buyekeza i-URL kumenyu yosizo futhi? inkinobho yesikrini ngasinye ngokuhlelwa kwewebhusayithi entsha
- umphathi we-watermark manje uyatholakala kuthebhu ye-exif / iptc
- iW • Cloud - Ukhohlwe iphasiwedi. Awukho umyalezo oboniswa uma kungekho i-imeyili efakiwe.
- usayizi wetemplate ulungisiwe wezinto ze-ios submenu. Ikhodi ishintshiwe ukuze ingazweli ecaleni.
- hlola isibuyekezo - uhlanza amanothi wokukhipha ukuze ulayini wokuqala uhambisane neminye imigqa.
- Umdali / Umbhali we-IPTC usethwe ku-iwatermark njengokuzenzakalelayo
- Ukuziphatha okuguqukile kokulayisha ama-watermark (ama) akhethiwe ku-PhotoNotary
Ukuziphatha okudala ---: layisha konke okukhethwe njenge-watermark ehlanganisiwe
--- ukuziphatha okusha: layisha wonke ama-watermark akhethiwe ngokulandelana ngaphandle kokuthi ukhiye wokukhetha ucindezelwe bese ayahlanganiswa futhi alayishwe.
- I-bug engaguquki ekukhetheni ama-watermark amaningi. kwesinye isikhathi umdwebo awungeze uma ama-watermark amaningi ekhethiwe.
- Ukulungiswa kwe-bug / isici: Ukuphathwa okuthuthukisiwe kwehluzo eziningi / i-QR Code / Amasiginesha asetshenziswa ngasikhathi sinye.
- izingxenye ezivuselelwe ze-ui
- ivuselelwe futhi yathuthukisa imanuwali.
- Kungezwe ukwesekwa kwelayisense yesiza
- isampula entsha ye-Applescript yokwenza osayizi ababili besithombe one-watermarked futhi eyodwa cha. ama-applescript konke ahlanganisiwe kufayela le-'WatermarkApplescrpts.zip 'elitholakala esigabeni se-applescript sencwajana
- Kungezwe i- "Stegomark Viewer" kumenyu yefayela. Ixhasa ukuhudula nokudonsa noma khetha ifayela ukubuka umbhalo ezithombeni zikaStegomark. Kubandakanya ukuhudula izithombe kusuka kuziphequluli. Funda okuqukethwe okufihliwe lapho kukhona okuthile.
- Kungezwe ukusekelwa okungcono kwephaneli yefonti kanye nemenyu yefonti
- Ukuguqulwa kombala okuhleliwe ngephaneli yefonti lapho usebenzisa amafonti owathandayo alondoloziwe
- Ukuphahlazeka okungaguquki lapho uhlela into ngaphandle kombala wethunzi lokwehla
- engeza ikhodi ethile yesilinganiso sokuphepha ukuze uvumele ukuqondiswa kwemifanekiso ye-watermark kusuka ku-hardrive yangaphandle ngaphandle kwefolda yesithombe somsebenzisi.
- I-UI yokuhlela ihluzo ebuyekezelwe i-Graphics Knockout White manje isibonisa umlayezo futhi ibuyela emuva ku-Off, uma ngabe ihluzo selivele line-Alfa noma iMask ehambisana nalo.
- kususwe ikhodi ethile ebheke ukuthi "umzila" wesithombe ukhona. Akusadingeki ngezinguquko zekhodi yesilinganiso sokuphepha
- Kulungisiwe: inkinga ngokufaka iStegoMark lapho kukhethwa ama-watermark amaningi.
- Ukuhlanzwa kwezitatimende ezengeziwe ze-log, nemininingwane elungiselelwe ingene ngemvume
- Kulungisiwe: hhayi i-watermarking enokhetho lwe-stegomark ehlulekayo. Akufanele ukungeze.
- Banner Watermark manje imiphumela uhlaka.
- Ukuthuthukiswa: Umbhalo womphumela wombhalo manje ungalungisa umbala nobubanzi bohlaka. Okuzenzakalelayo kusethwe kububanzi bamaphikseli ama-2, no-White. Kumenyu yemiphumela ungasetha le mingcele. Ububanzi bamaphikseli angu-1 kuye kwangama-50. Setha imibala ibe ngu: Red, Blue, Green, Yellow, Black and White
- I-V2.0.10 uma usebenzisa i-% ivumile noma ikuphi, ama-Pixels angama-pixels angama -75 kuya kuma-95 kuphela kusuka emaphethelweni akhethiwe.
- Iphutha le-Appelscript elinqunyelwe ukukhetha i-watermark engalungile (bonga i-XYX ukuyibika).
- Lungisa i-max offset yamaphikseli ukuze usayizi usayizi we-max noma i-600 Pixel.
Qaphela: Resize max isethwe lapho umhleli uvulekile, vala, lungisa usayizi bese uvula kabusha ukuvuselela. isamba esikhulu max% range namanje -75% kuye ku-95%
- Ukuvuza kwenkumbulo okuncane kulungisiwe.
- Lungisa isithombe sokubuka kuqala ku-UI ye-Graphic ukukala kahle ngokuqondile.
- okunye ukulungiswa kokuhlelwa ngokuhambisana ne-iWatermark Pro ye-Windows V3.0.9 Beta.
- Ukuhlelwa kwangaphambili okusetshenziswe njalo kwimenyu yesayizi yesifanekiso kufaka phakathi amamenyu angaphansi ngezinhlobo
- I-Fixed Demo 7 ngakho-ke ihlala ishintsha usayizi iye kuma-75% noma ngemuva kokuhlelwa. Ngaphambi kwale nguqulo kuzovala ukukala kuhlelwe.
- Hlanza wonke ama-watermark wedemo (susa ukubuka kuqala nesampula le-HTML njengoba zivuselelwa uma zithunyelwa) bese uthuthukela kufomethi yamanje nokuzenzakalelayo.
- fix bug ikhodi yokulungisa iphutha ishiywe ivunyelwe, okuholele ekutheni kufakwe yonke i-watermark yombhalo.
- Kungezwe amathegi amasha alahlekile kwimenyu yokufaka ithegi ye-GPS.
- Inkinga yokuhlelwa kombhalo okungaguquki.
- [ingezwe] izinhlobo ezimbili ezintsha ze-GPS Tag ngokunemba kwamadijithi ayi-6: Latitude6, Latitude Deg MM ss6, Longitude6 ne-Longitude Deg MM ss6.
- [kulungisiwe] Lapho i-mIPTCembeded ikhethiwe futhi ingalondolozi imethadatha, NGEKE ilondoloze i-ProfileName, i-Orientations, ne-Colour Model.
- [kulungisiwe] Idatha ekhona ye-EXIF neye-IPTC Meta ayizange ikopishwe lapho imethadatha yekhophi ikhethwa futhi ubungashumeki i-IPTC.
- Izixhumanisi [ezibuyekeziwe] kumenyu yosizo kuzinhlelo zokusebenza zamanje ze-IOS kanye ne-Android
- Ukuguqula kusuka ku-TIFF kuye ku-TIFF ngaphandle kwe-Alpha kudala isiteshi se-Alpha esingadingeki.
- Idatha ye-IPTC ayisekeli amathegi afana ne- .
- Ukushintsha kwesimo sombhalo lapho usebenzisa imiphumela.
- Kungezwe ukusekelwa okuyisisekelo kokufunda amafayela we-heic ku-os X 10.13 noma kamuva (noma yini ukubuka kuqala okufundwayo kufanele kusebenze).
- Isiphazamisi Esilungisiwe: Ibha yokupheqa yeVector ayihambisi ekuqaleni.
- Shintsha i-QR Code ukudweba umbala ongemuva ngemuva kwe-QR Code. Lolu shintsho beluzofanisa inguqulo ye-Windows v3.0.7 ye-iWatermark.
- I-Fixed bug: Umbhalo wePadding ku-watermark yombhalo awusebenzi.
- I-UI eyengeziwe yokusetha ububanzi be-Vector stroke.
- I-Fixed Bug: Text Editor: manje isetshenzisiwe ukufaka ukhiye womugqa omusha ngokuzenzakalela futhi ugcine iphuzu lokufaka lapho ufaka amathegi.
- Lungisa ukuhlelwa kokuhlelwa kwe-UI nezinkinga zokupela.
- Kungezwe i-UI Ngemininingwane yomngcele we-Graphics ie. ukusetha ububanzi beRadius kanye neBorder kuzungeze ihluzo.
- I-Fixed Bug: ku-watermark yombhalo emisha entsha uma okungemuva kungathikhiwe ukuthi isibhengezo sicwebeka kanjani ngokusobala? Okuzenzakalelayo kube ngu-45% okumhlophe okusobala.
- Ithebhu elahlekile engekho:
- Kungezwe ukusekelwa kokushumeka amanye amathegi (Izimfanelo, Ulwazi Lwefayela, i-EXIF, i-TIFF, i-GEO, njll) kwimininingwane ye-IPTC meta efana kusaziso se-copyright.
- Kungezwe ikhodi yokuhlanza ama-watermark wefa lapho uthumela ukuhambisana okwengeziwe ngenguqulo yeWindows.
(I-v1.02 edlule yenguqulo yewindows ifaka ukhiye wezinga eliphezulu entweni
- Kususwe ukhiye "wemodi" wefa
- Indawo eyengeziwe uma ingachaziwe njenge-%.
- Ama-watermark wefa elungisiwe lapho uphinda uthumela ngaphandle ukuze ube ne-OffsetX ne-OffsetY njengama-integer. Abanye basebenzisa ukuthekelisa njengezintambo.
- Udaba oluhleliwe lokugoqwa kombhalo / lokuqiniswa ngamabhanela we-Vertical.
- Kushintshwe umbala wangemuva ozenzakalelayo wesibhengezo ku-White nge .25 Opacity.
- Fixed Graphics layout nge padding
- I-Fixed Arc Text Embossed, Izinketho eziqoshiwe.
- Ukuhlelwa okulungisiwe kombhalo nge-padding nama-Frames.
- Kungezwe into entsha yamawindi "Umphathi weWatermark" ukukhombisa / ukufihla iDraw (Shift-CMD-M).
- Kungezwe i-padding w slider kuma-Border windows ezintantayo ukuvumela ukuguqulwa ngakunye kozimele nokunamathisela.
- Kungezwe omaki abasha , ukufanisa iWindows version 3.0.7
- Shintsha ukuphuma kwe-TIFF ukuze usebenzise i-LZW compression esikhundleni se-NONE. Lokhu ukwenza umkhawulo we-2GB wefomethi ye-TIFF ukuvumela izithombe ezinkulu ze-TIFF.
Qaphela: Kushintshwe i-UI ukufaka inketho yokuphoqa okumhlophe ngemuva kweQR Code ngokuziphatha okudala.
- Ukulungiswa kwamaphutha: Isihleli esine-QRCode, umthwalo wesithombe se-bitmap yesiginesha, awukhishwanga ngakho-ke umhleli olandelayo ube nomdwebo we-phantom.
- Ukulungiswa Kweziphazamiso: Kubhalwe nge-Embossed futhi kuqoshiwe manje sekuyasebenza futhi ngama-watermark wombhalo.
- Ukulungiswa Kwamaphutha: Isithombe besingalayishi ukusuka kudiski. Akuvelanga isithombe.
- Ukulungiswa Kwamaphutha: I-StegoMark nge ithegi ayisebenzi ilungisiwe. Akukho okungena esikhundleni se- unyaka owakhiwe. efanayo namathegi we-Text Watermark.
* Ukuziphatha kushintshiwe sicela ubuyekeze ama-watermark akho e-QR Code: "make White Transparent" uma yehluleka, isithombe sokuqala sisetshenziswa, esikhundleni sesithombe.
* Ikhodi ye-QR idinga iMacOS 10.9 noma eyakamuva.
* Impendulo eshintshiwe lapho ifomethi yokukhipha ingeyona i-JPG yeStegomark iye ku:
"Iphutha lohlobo lokukhipha okungalungile, shintsha uhlobo lwefayela lokukhipha luye ku-JPEG ukuze lucubungulwe nge-StegoMark." futhi udlale i- "Beep";
* Izinhlamvu ezikhethekile okungukuthi. okungezona i-ASCII akusekelwa ku-Stegomark.
(Kungezwe ikhodi yokuguqula: © ™ no • kuya ku-: (c), TM, no *).
* Inkinga: Isibhengezo esime mpo asigoqi umbhalo uma kungalungiswa. Ovundlile azosonga. Ukusebenza: Faka ngesandla umugqa omusha.
Lokhu ukukhishwa kokuqala okukhulu kwe-iWatermark Pro 2.0. Lolu uhlu lwazo zonke izici ezibaluleke kakhulu ezisuka ku-1.0 ziye ku-2.0
- Amathegi abuyekeziwe kusihleli sombhalo se-iWatermark se-GPS (i-Alt. I-Speet neLat.) Namanje (usuku, isikhathi, unyaka, inani) nezimpawu zefayela
- Ukujikeleza okuvunyelwe nokukhulisa ukushukuma komzimba kuma-watermark ombhalo, we-Graphic ne-Vector. Ne-Smart Zoom yokuvula / ukuvala ukukala.
- Kuvunyelwe Ukubheka Okusheshayo ekubukeni kuqala kokubuka kuqala i-smart Zoom ekubukeni kuqala kokufakwayo. ie. Phoqa impendulo ye-Click ne-haptic.
- Ukulungiswa okuhleliwe komphathi we-Watermark ICON ikholomu.
- I-Counter evunyelwe ku-Qamba kabusha ithebhu ngaso sonke isikhathi, ngoba ibuye isetshenziswe kuma-Mata Data Tags.
- Ithegi yokufaka imenyu ye-Fixed Text Editor ibilahlekile
- Amathegi angeziwe eNyanga Yokudala, Usuku Lokudala Nenyanga # # nosuku ##.
Ngosuku lokudala lwesithombe:
ukuvumela ..ukukhiqiza i-2017.03.10 kumathegi wombhalo.
- Kungezwe umbhalo we-Emboss / oqoshiwe
- Izinguquko eziningi ze-ui
- Ama-watermark amasha angezwe kusukela ku-version 1.0, Lines, Border, Text On Arc ne-Text Banner
- Umbala wangemuva we-Fixed text Editor futhi ucisha iDropshadow.
- Kungezwe ingemuva lokhiye we-watermarkOnOff - i-boolean yokulandela ukuthi i-alpha iyiZero (icishiwe).
- I-Counter evunyelwe ku-Qamba kabusha ithebhu ngaso sonke isikhathi, ngoba isetshenziswa nakuMeta Data Tags.
- Umaki ongeziwe we-GPS enamadijithi ayi-7 ' ',' 'nikeza ukunemba kwamadijithi ama-3.
- Amathegi abuyekeziwe kusihleli sombhalo se-iWatermark se-GPS (i-Alt. I-Speet neLat.) Namanje (usuku, isikhathi, unyaka, inani) kanye Nezimfanelo Zefayela
- Ukujikeleza okuvunyelwe nokukhulisa ukushukuma komzimba kuma-watermark ombhalo, we-Graphic ne-Vector. Futhi i-Smart Zoom yokulinganisa ukukala / ukuvala.
- Isihleli: Ukusebenza: Ukulondolozwa kwesikhashana komthombo wesithombe kumhleli wokuphinda kusetshenziswe kabusha ngokushesha. Okuqapheleka kakhulu lapho umthombo uyisithombe esikhulu se-RAW.
- Kwenzelwe futhi izimbungulu zilungisiwe
- Imanuwali ebuyekeziwe.
- iwindi lokuhlela le-watermark manje hlala ngaphambili.
- Umbala wombhalo ohleliwe uzenzakalelayo omnyama kusihleli se-watermark.
- Umbhalo we-Emboss / oqoshiwe ohleliwe (okhubazeke ngokungazelelwe ku-V2.00fc3).
- Umbhalo we-Arc onikwe amandla nama-Banner Watermark Ama-Emboss / ama-Embraved Text bugs / izingqinamba ze-UI nge-Emboss and Embraved:
Isizinda esibhaliwe nesizinda se-Embossed
----- Umbala wombhalo awunawo umphumela okufanele ufihlwe noma ukhutshazwe.
----- kufanele isethwe ukuthi icace (ie Alpha = 0.0)
Umbala wangemuva we----- kufanele uvaliwe kukho konke okuqoshiwe nokubethelwa
Isizinda se- ----- asikwazi ukuqina noma asikwazi ukubona umbhalo.
----- Umbhalo we-Emboss / oqoshiwe ne-Arc Text Watermark awasekelwa ku-Repeating Watermark.
- ama-watermark amasha
- Ui olusha
- izinguquko eziningi nokulungiswa okuningi.
- ibhukwana elisha.
- siqoqa wonke amanothi futhi sizothumela imininingwane eminingi lapha.
- sicela usinike impendulo yakho ngalesi sibuyekezo esikhulu.
OKUBALULEKILE: Le nguqulo nezinguqulo ezizayo zidinga ukulandwa ngesandla ngenxa yezinguquko ezenziwe i-Apple kwezokuphepha. https://plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip 'Hlola izibuyekezo' manje isebenza ngokuhlukile. Landa izibuyekezo ngesandla, susa inguqulo yakudala bese ufaka inguqulo entsha kufolda yohlelo lokusebenza.
- Fixed kufakwa "Len" meta data (Len Info, Len Model, Len ID) kumhleli. Bekufaka uLen Model esikhundleni se
- I-UI evuselelwe ukuvumelanisa ukubuka kuqala lapho umsebenzisi esusa zonke izinto zokufaka
- futhi uvumelanise ukubuka kuqala lapho ushintsha isithombe kudrowa yeWatermark Mangement.
- Amagama abuyekeziwe lapho usebenzisa "isithombe Sokubuka kuqala Sampula".
- Ukuphahlazeka okulungisiwe ngo-10.7 lapho kunika amandla ukuphuma kwe-Sepia noma i-Greyscale. Lokhu bekungenxa yokuthi izinketho ze-AutoCorrection bezingatholakali kuze kube ngu-10.8.x. Zasethwa lapho kukhethwa iSepia neGreyscale. Manje zifihliwe ku-10.7.x.
- kususwe uhlaka lwe-sparkle (alusebenzisi okwamanje ngenxa yezinguquko ze-sandbox yi-Apple)
- Isibuyekezo senguqulo esibuyekeziwe ukwazi nge-pre
- Fixed 1 pixel off inkinga eqondanisa isandla sokudla noma phezulu.
- hlanza umyalezo othile we-log ne-loggin ethuthukisiwe yezinkinga zokuhlelwa
- Kushintshwe izinketho zokuvuselela ukulanda i-zip ukuze isebenze ngezinkinga ze-sandbox.
- Dinga i-OS X 10.7 noma kamuva ye-PhotoNotary. Ngakho-ke, ngo-10.6 i-PhotoNotary izothi ikhutshaziwe.
- Inkinga yokusayina ehleliwe ehlobene nokuxhaswa kwe-10.7, 10.8, 10.9 no-10.10.
- Susa i-ps2png ngaphandle kwefolda yezinsizakusebenza, njengoba kusikiselwe yi-Apple.
- ukuhlanza ikhodi encane
OKUBALULEKILE: Le nguqulo nezinguqulo ezizayo zidinga ukulandwa ngesandla ngenxa yezinguquko ezenziwe i-Apple kwezokuphepha. https://plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip I 'Check for Updates' ejwayelekile ayisasebenzi ngendlela efanayo. Ukubuyekeza kuzodinga ukulandwa ngesandla kuyo yonke inguqulo entsha.
- Shintsha izinketho zokuvuselela ukulanda i-zip ukuze usebenze ngezinkinga ze-sandbox.
- Kushintshwe ukuskena kwefolda yokufaka ukulungisa inkinga enganqamuki ezihlahleni ezinkulu zefolda kwenye yekhodi yefa le-Apple. Kubukeka sengathi kuhlobene nokuvuselelwa kwe-10.10.2.
- Kukhishwe okwakhelwe ngaphakathi ukulanda nokufaka ama-plugins e-iPhoto kanye ne-Aperture, awasetshenziswa kuhlelo lokusebenza lwe-Apple's Photo eliku-OS X 10.10.3 elitholakala ngo-Ephreli. Uhlelo lokusebenza lwe-Apple's Photos lungena esikhundleni se-iPhoto kanye ne-Aperture. Isifaki esingalandwa sizoqhubeka nokutholakala kumanyuwali yokuxhumanisa kulabo abafuna ukusisebenzisa. Imininingwane eminingi ngalokhu isencwadini.
- Inkinga ehleliwe PhotoNotary show non
Ifolda yeWatermark ku- "Ama-Albhamu Ami".
- Ikhodi elungisiwe yokwakha isixhumanisi kufolda yezithombe kufolda yeWatermark Script ukuze ifinyeleleke kalula.
- Kubuyekezwe imenyu yeSkripthi ukungena ngephutha lapho kwakhiwa isixhumanisi esisuka kufolda yezithombe zomuntu siye kufolda yeskripthi
- Kubuyekezwe imenyu yeSkripthi, ukubuyekeza ngemuva kokulondoloza izilungiselelo ezintsha kufolda yeskripthi "com.plumamazing.iwatermarkpro".
- Ukulungiswa kokulungiswa okuhleliwe njenge-AppleScript, ngakho-ke ifolda yokufaka ayisethiwe, kuphawulwa ngayo ukuze iskripthi sisebenze.
- Kushintshwe okuzenzakalelayo kokusetha kabusha okokufaka ku- "ekuqaleni", kungacaci ekuqaleni (susa kabusha ifolda ekhethiwe),
- Susa ikhodi ethile yefa edale ukufakwa kwefayela lokungena ngo-10.10.2.
- Kususwe ukwakhiwa kweDroplet ngenxa yezidingo ezintsha zokuphepha zika-10.9.5 no-10.10.x
- Kungezwe kabusha inketho entsha. Ukusetha inani lekhawuntari lokuqalisa. Okuzenzakalelayo kungu-1.
- Imibhalo Yesampula Entsha yokugeleza komsebenzi womsebenzisi wokugcina (bona izixhumanisi ezisuka ku-Manual).
- Kungezwe izinketho zokucija ukufaka isicelo sokukhishwa kwamafayela.
- Kungezwe izinketho zokulungiswa okuzenzakalelayo ukufaka amafayela wokukhipha. (Okwamanje noma yikuphi ku- = konke kuvuliwe noma kuvaliwe
- izolungisa ekukhishweni okulandelayo).
- Kungezwe i-sepia ne-BW / Grey esikalini sezinhlobo zokukhipha ku-Sub
ifolda ebizwa nge-sepia ne-BW ngokulandelana
- Ithebhu Yokwengeza yefomethi yokufometha kokukhipha nokuthuthukiswa kokukhipha
- UI ushintsho: Kungezwe kabusha inketho entsha. Ukusetha inani lekhawuntari lokuqalisa. Okuzenzakalelayo kungu-1.
- Ushintsho lwe-UI: Ikhasi leMethadatha elihanjisiwe "Kopisha usuku lokudala" kusuka ekhasini eliQanjwe kabusha.
- Ukushintsha kwe-UI: Ifomethi yefayela elihanjisiwe kuya ku-Fometha ithebhu kusuka ku-Qamba kabusha ithebhu
- Ukushintsha kwe-UI: Kuhanjiswe iThabhu Elikhulu, Isakhiwo SeFolda kuThebhu Yokukhipha
[Kulungisiwe] Kususwe imilayezo eyengeziwe ye-Log ku-V1.54r2 ie. I-DrawTXT: indala [Ilungisiwe] Uma uqala ukucubungula, isusa umyalezo wokuqedela. ie. "Iqedile ukucubungula". [Mod] Ukucwengwa: Idemo
- Uhlaka lwe-Watermark empunga me.wmk4
- offset umbhalo ngezansi nge-1% bese ungeza isikhala ekugcineni [Fixed] nge-OS X 10.6.8 engadwebi ama-watermark wombhalo. [Kulungisiwe] ukubuka kuqala kwe-Blend Modes [Mod] Lapho Izikripthi Zethu Zokusebenza zingekho ie. "~ / Library / Application Scripts / com.plumamazing.iwatermarkpro" ayikho futhi asikwazi ukuyakha Manje sikhombisa ifolda yomzali: "Izicelo Zemibhalo" futhi uxwayise umsebenzisi ukuthi azenzele ifolda ngesandla: "com.plumamazing.iwatermarkpro" [ Mod] i-QuickLook Version # kusuka ku-v1.51 kuye ku-V1.54 (sikhohlwe ukuyibuyekeza).
[Kuthuthukisiwe] Izinguquko ze-UI kumphathi we-watermark 1. manje, sesha phezulu, 2. inkambu yokuqamba kabusha igama ingeziwe, 3. ukuguqulwa kokuzenzakalelayo usuku olufushane kusuka kosuku olude ngaphambili. 3. chofoza kabili ku-watermark ukuhlela. chofoza kabili okusetshenziselwa ukuvumela ukuqamba kabusha.
Isihleli se- [Fixed] manje silungile senza ukuhlela kwamanje ngaphambi kokulondolozwa.
Imininingwane yento elungisiwe ithuthukisiwe. manje bika # yento akukho okususiwe futhi kukhonjiswe umbhalo wento ekhethiwe
[Kungezwe] ama-watermark ama-demo amasha angama-23 angezwe ekucushweni okuzenzakalelayo kohlelo lokusebenza. bakhombisa izinto ezahlukahlukene. konke lokhu kuzolayisha abasebenzisi bokuqala. Okwabasebenzisi bangaphambilini ukuzilayisha noma: 1. khetha ukusetha kabusha okuzenzakalelayo kuthebhu ethuthukisiwe noma 2. ukulanda kusuka kuwebhusayithi: https://plumamazing.com/bin/iwatermarkpro/Defaultwatermarks.zip lawa ma-watermark abonisa ukuthi isetshenziswa kanjani imethadatha njenge-watermark, ukusetshenziswa komfanekiso izinketho, usebenzisa isikali namathuluzi endawo, ukusetshenziswa kwedatha yencwadi yamakheli, imiphumela ekhethekile, njll.
[I-Fixed] ibuyisela iwebhusayithi ye-Creative commons lapho uhlelo lokusebenza luhamba.
[Kuthuthukisiwe] izinguquko ezincane ze-ui ukwenza ngcono ukusetshenziswa okulula.
Kuthuthukisiwe] umphathi we-watermark ui. yenze inkambu ye-IPTC / XMP yesibili ukuvumela ukubonisa lapho i-watermark ishumeke imininingwane ye-IPTC / XMP. ukushumeka kwenziwa kwimenyu yamagiya ezansi kwe-watermark mananger. sebenzisa into yemenyu 'Shumeka i-IPTC / XMP ku-watermark ekhethiwe'. ngakho-ke, manje i-watermark ingangeza i-watermark ebonakalayo futhi ngasikhathi sinye ifake imethadatha ye-IPTC / XMP esithombeni ngasinye.
Izinguquko ze-1.51 Version
[Kungezwe] iWatermark manje iyasebenziseka. Imenyu yeSkriphthi ingeziwe. Lokhu kuvumela ukuqhutshwa komsebenzi okuphelele ukuthi kudalwe. Ukufinyelela okugcwele nge-AppleScript kuzo zonke izilungiselelo nezinye izici eziwusizo: * Uhlu lwama-watermark, i-watermark ekhethiwe (rw) * # yesithombe esitholakele * inkomba yesithombe samanje (rW) * uhlu lwezindlela ezitholwa ezithombeni. * Isimo senqubo yamanje (r) * umyalo wokuqalisa ukucubungula, skena kabusha ifolda yokufaka.
[Kushintshiwe] Ukujikeleza okungaguquki nokwesekwa kokuthinta kwezandla.
[Kungezwe] i-Sandboxing inikwe amandla.
[Kungezwe] Uhlelo lokusebenza lusayiniwe futhi lwahlanganiswa ne-XCode yakamuva. Ikhodi ilungiselelwe.
[Kungezwe] Ama-watermark athunyelwe kusuka ku-Mac manje asebenza ku-Windows futhi okuphambene nalokho.
[Kungezwe] OS X 10.8 Izinketho zokwabelana zokubuka kuqala - i-AirDrop, iFlickr, i-Twitter, i-FaceBook, njll.
[Kungezwe] Ukufinyelela ku-iWatermark ngamafonti we-iOS wokuhambisana. Vula ku-Advanced: Ukwabelana ngethebhu.
[Kungezwe] Ihluzo ezintsha zeSampula (Iqoqo Elimhlophe) kanye (Neqoqo Elimnyama).
[Ishintshiwe] i-thumbnail generator manje idala ukwakheka kwesiqondisi sangempela (isb. Ihlonipha izilungiselelo zesakhiwo sefolda).
[Kushintshiwe] Umkhawulo we-offset uye kokungu -25% wesithombe ukuvumela i-watermark ukuthi ibekwe kancane kusithombe.
[Kubuyekezwe] I-Dropbox ku-v1 API, futhi kwenze konke ukuxhumeka kusebenzise ukuxhumeka okubethelwe (https: //).
[Kubuyekezwe] I-plugin ye-QuickLook yama-watermark ibuyekeziwe futhi yathuthukiswa.
[Hlanza] ifolda yelabhulali yemifanekiso iqanjwe kabusha futhi yahlelwa. Kushintshwe Amasampula ku- "Artwork Library" futhi engeza ihluzo ezintsha.
[Ukuvuselelwa kwe-UI] Umhleli, imenyu yombhalo eshintshiwe ukufaka izinketho ze-AddressBook.
Ukuvuselelwa kuqala komhleli kusihleli akusadingi ukonga i-watermark yamanje.
[Kungezwe] khetha zonke izinto ze-watermark ezingezwe kwimenyu yokubuka.
[I-Fixed] "Bonisa izibambo zento" eziqabulayo manje ngemuva koshintsho.
[I-Fixed] Isihleli Sokuvula - Ukulungiswa.
[Kungezwe] ukuxhaswa kokusekelwa kusandiso sefayela le- ".iwmkMetaSet" nokuchofoza kabili kuzolayisha idatha ye-meta ye-iptc / xmp.
[Kungezwe] ukusekelwa kokusekelwa kwepulatifomu enqwabelanayo kufayela le-watermark (.wmk) kuthunyelwe ukuze kufakwe inguqulo ye- "rtf" ne- "html" yama-watermark wombhalo.
[Kushintshiwe] Shintsha umdwebo ukuze uvumele izithombe ezibonakalayo ze-png noma ze-PSD.
[Kungezwe] izinketho zokushintsha usayizi (Ibhokisi le-Fit (isb. Bobabili ububanzi nokuphakama), ubude obulinganayo, Ububanzi obulinganayo
[Kungezwe] Usekelo olwengeziwe% wosayizi wamanje wokushintsha usayizi.
[Ishintshiwe] shintsha usayizi wemenyu yokusetha kabusha ibe "enye" ​​lapho umsebenzisi eguqukela ku-% noma ehlela ububanzi ukuphakama.
[Kungezwe] Dala ukubuka kuqala ku-Watermark Manager ngolwazi lobuchwepheshe.
[Kungezwe] imigqa yesakhiwo yezinto zebhokisi lendawo ezingeziwe.
[Kungezwe] Ukwabelana - kwenze kwaba lula ukwabelana ngesixhumanisi kufolda yakho yeWatermark kuDropbox.
[Kungezwe] Ukusekelwa kokwehla komoya okwabelana ngama-watermark phakathi kwekhompyutha ye-Macintosh esebenzisa u-10.7 noma u-10.8. U-10.8 udinga ukuthumela, u-10.7 noma kamuva ukuthola okutholwayo, bese ungenisa ku-iWatermark.
[Kungezwe] Guqula iwindi lokubuka kuqala ngomyalo p nange-shift-command-spacebar.
[Kungezwe] Inketho yebhokisi lokuhlola le-JPG eliqhubekayo ku-ithebhu enezinketho ze-JPEG. Isuswe kuthebhu ethuthukisiwe.
[Kungezwe] Inketho engeziwe kuMphathi weWatermark ukushumeka i-IPTC / XMP kuma-watermark
[Kungezwe] Kuvunyelwe Ukuthumela ama-watermark nge-Watermark Manager -> Yabelana ngemenyu (Ukwehla komoya, i-imeyili, iMessenges (iChat), ibhokisi lokudonsa).
[Kushintshiwe] Manje kukhutshaziwe / nika amandla imenyu ngokuya ngesimo sokungena ngemvume seDropbox.
[Kushintshiwe] Shintsha usayizi wesifanekiso semenyu (ukusetha ngesihloko, i-iOS, ama-Monitors, Ikhamera njll).
[Kungezwe] Ukulungiswa okuncane okuningi, ukulungiswa nokulungiswa kwe-ui kukhulu kakhulu ukuthi ungakubhala lapha.
Zingaki izinguqulo ze-OS ngokuvamile ezesekelwa kuhlelo lokusebenza ngalunye?
Ukuvuselelwa okukhulu kuzohlala kusekela okungenani izinhlobo zamanje nezangaphambilini ze-OS ku-Mac, Windows, iOS naku-Android.
Sithanda ukukwazi ukunikeza ukusekelwa kwezinguqulo ezindala ze-OS ngayinye kepha lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi futhi kwezinye izimo kungasivimba ekutheni sikwazi ukusizakala ngokuthuthuka kwakamuva kohlelo olusebenzayo.
Siyaqhubeka nokuzama ukuhlinzeka ngezinguqulo ezindala zesoftware yethu ngezinhlobo zakudala zezinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza. Thepha lapha ukuthola izinhlobo ezindala ku-Mac naku-Windows